October 10, 2021 - Online Hartha
ရဆေငျးပိုကျထဲက ငွီးသံကွားပွီး အသကျ(၃)ခြောငျးကို ကယျတငျခဲ့တဲ့ အမြိုးသား
October 10, 2021 by Online Hartha
ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်း နမ်ဒင်းမြို့မှာတော့ အံ့အားသင့်ဖွယ် အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ အဲဒါကတော့ ခွေးပေါက်လေး(၃) ကောင်ကို ရေဆင်းပေါက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ ခက်ခက်ခဲခဲ ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါနော်။ Viral Hog သတင်းမီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့တာက အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ တူ၊ဆောက်စတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ ရေဆင်းပေါက်ကို အချိန်အတော်ကြာ ဖဲ့ရွဲ့ကာခွေးလေးတွေကို အပြင်ထုတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်တဲ့။ အနက်ရောင် ခွေးပေါက်လေး (၃) ကောင်ဟာ ပိုက်အပြင်ကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဖုန်မှူန့်တွေနဲ့ လူးနေတာပါ။ အမျိုးသားက စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပိုက်ကိုဖောက်ခဲ့တာကြောင့်ခွေးလေးတွေဟာ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်တာမျိုးတော့ မရှိခဲ့ပါဘူးနော်။ ခွေးလေးတွေကတော့ အကူအညီလိုအပ်နေတာကြောင့် တအီအီနဲ့ ညည်းညူနေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအမျိုးသားဟာ ရေဆင်းပေါက်ကိုအပေါက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကာ ခွေးပေါက်လေးတွေကို အပြင်ထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးတော့ဘေးနားမှာ ရပ်ကြည့်နေခဲ့တဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာအမျိုးသမီးကတော့ ခွေးလေးတွေကို ဘေးလွတ်ရာဆီ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်။ ထို အမျိုးသမီးဟာ … Read more
သင့်မှာ ဒီလိုနိမိတ်တွေ မြင်လာ ကြုံလာပြီဆိုရင် သတိထားပါတော့
ဒီလိုနိမိတ်တွေ မြင်လာ ကြုံလာပြီဆိုရင် သတိထားပါတော့ (၁) ယူသွားမယ့်အထုပ်ဟာမမျှော်လင့်ပဲပြုတ်ကျပွင့်ကျရင်။ (၂) ကျကွဲသွားရင်။ (၃) သွားခါနီးဝတ်တဲ့အဝတ်အစား ဗျိကနဲပြဲသွားရင်။ (၄) ကိုယ်လေးစားတဲ့သူ တစ်ယောက် ယောက်ကို ကလေးတစ်ယောက်ကတားထားဆွဲထားရင်။ (၅) လမ်းသွားရင်းသစ်ကိုင်းနဲ့နဖူးရိုက်မိတာ၊ ခလုတ်တိုက်ခြေမကွဲတာ။ (၆) အငှါးယဉ်တားစီးတဲ့အခါ သုံးကြိမ်ထက် မနည်းဈေးမတည့်တဲ့အခါ။ (၇) လမ်းတစ်လျှောက်မှာလက်ခါပြသူတွေကိုတွေ့မြင်သောအခါ။ (၈) ကိုယ့်ရှေ့တည့်တည့်ကလူကမေးထောက်ပြီးညည်းညူနေရင်။ (၉) ကိုယ့်ရှေ့မှာနွားကျွဲမြင်းခွေးကလေးလူကြီးစသည်တို့ကို ရက် စက်စွာရိုက်ပုတ်ညှင်းပန်းနေရင်။ (၁၀) ကားစီးသော်လမ်းမှာကားပျက်မှုကြုံသော်၊ စက်နှိုးမရပုံစံဖြစ်သော်။ (၁၁) ကိုယ့်ရှေ့မှာယာဉ်တိုက်မှုမြင်သော်။ (၁၂) အတူသွားသူနှင့်ရန်ဖြစ်စကားများ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်သော်။ (၁၃)မိမိခြေထောက်ကို နှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းတက်နင်းခံသော်။ (၁၄) မျက်မှန်ပြုတ်ကျသော်။ (၁၅)ကိုယ့်ရှေ့မှာလူ၊ယာဉ်၊ပစ္စည်းတစ်ခုခုလာပိတ်ရပ်သော်။ (၁၆) လမ်းသွားရင်းမျက်လှည့်ပြတာတွေ့ရင် (ကိုယ်ကဝင်ရပ်ကြည့်သော်ဘာမှမဖြစ်) ။ (၁၇) ကိုယ့်ရှေ့မှာဆိတ်နွားခွေးကြောင်ငှက်စသည်တို့ရန်ဖြစ်သော်။ (၁၈) ကိုယ့်မြင်ကွင်းရှေ့မှာလက်ထိပ်သံကြိုးစသည်တို့ဖြင့် ချည် နှောင်ကာခေါ်သွားသော်။ (၁၉) … Read more
ဖြေးဖြေးမောင်းပါ ဒရိုင်ဘာရယ် သီတာ ရင်တွေတုန်လွန်းလို့ပါ ဆရာတော်
ဆရာတော် ဦးနန္ဒိမာ မြစ်ကြီးနားကနေ မုံရွာမန္တလေးဘက် ခရီးသွားစရာ ရှိ၍ ကားလက်မှတ် ဖြတ်ထားခဲ့သည်။ ဘုန်းကံအရှိန်အဝါပဲ နည်းလို့လား၊ တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်လား မပြောတတ်။ ဆရာတော် ခရီးသွားတိုင်း ရှေ့ဆုံးခုံတန်း မရတတ်။ တစ်ဆယ်နောက်က ထိုင်ခုံနံပါတ်သာ ရလေ့ရှိသည်။ ဒါကို ဆရာတော် မကျေနပ်ချင်။ သံဃာခုံလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရှေ့ဆုံးတန်းမှာ အမျိုးသမီး ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေ ထိုင်နေပြီး မိမိက တစ်ဆယ်နောက်မှာ ထိုင်ရလေ့ရှိတာကိုလည်း သတိထားမိသည်သာ။ လမ်းကစောင့်စီးမည်ဟု ကြိုတင်မှာကြားထားသဖြင့် ကားလာချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေလိုက်သည်။ မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့်စောင့်လိုက်ရပြီး ဆရာတော်စီးမည့်ကား ဆိုက်လာသည်။ အထုတ်အပိုးနှင့် စောင့်နေသည်က ဦးနန္ဒိမာ တစ်ပါးသာ။ ကားစပယ်ယာက ဆရာတော်ကို ကျော်ပြီး ခရီးသည်နာမည် အော်ခေါ်လိုက်သည်က…. မုံရွာလိုက်မယ့် လမ်းကြိုခရီးသည် ခုံနံပါတ်တစ် မသီတာ ရှိလားခင်ဗျား… မသီတာကား ထွက်မလာ။ … Read more
ဆရာမလေးရဲ့မေးခွန်းတွေကြောင့် မျက်လုံးပြူးသွားရတဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအဖြစ်
” တက္ကသိုလ်သာ ပို့လိုက်ပါတော့ ဆရာမ” သုံးတန်းကျောင်းသားက ဆရာမကို လာပြောတယ်။ ” ကျနော်က …ကျနော့ညီမထက် တော်တယ်။ သူကတော့ လေးတန်းမှာ” ဒီလို ….ဒီလိုနဲ့….အမြဲပြောနေတော့ဆရာမ က…သူ့ကို …..ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးဆီခေါ်သွားခဲ့တယ်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက လေးတန်းစာ….စစ်ကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ ” ၃ + ၃”” ၆ ” ” ၆+၆ “”၁၂ ” ဆရာကြီးမေးတာ ကျောင်းသားက …အားလုံး မှန်အောင်ဖြေနိုင်တယ်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ဒီကျောင်းသားလေးကိုလေးတန်း ချက်ခြင်းပို့ခိုင်းတယ်။ ဆရာမက …..ထပ်စစ်ချင်တယ်ပြောတော့ဆရာကြီးက ခွင့်ပြုလိုက်တယ်” ” နွားမှာ လေး လူမှာနှစ် ဒါဘာလဲ… ? ” ” ခြေထောက်ပါ ဆရာမ” ” C နဲ့ စပြီး T … Read more
မယုံနိုင်စရာ ထူးထူးခြားခြား စားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ မြေကြီးခဲတွေရောင်းတဲ့ အဖွားအို
မယုံနိုင် စရာ ထူးထူးခြားခြား စားလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ မြေကြီးခဲတွေ ရောင်းတဲ့ အဖွားအို မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သင် မြင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြားခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုံးဝ ယုံနိုင်မှာတောင် မဟုတ်တဲ့ မြေကြီးခဲ တွေကိုရောင်းတဲ့ထူးခြားတဲ့အဖွားအို အကြောင်းလေး ဗဟုသုတ စေရန်အလို့ငှာ ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက် ပါတယ်နော်။ ရှေးခေတ် ဗြဟ္မာကြီးတွေ မြေသင်းစား လို့ ထူးဆန်းတဲ့ အချစ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သတဲ့ (မင်းအောင် သီချင်းထဲ ကြားဖူးခဲ့တာပါ) တစ်ကယ့် မြေကြီးကိုစားစရာ အဖြစ် ရောင်းမှန်း ခုမှပဲသိခဲ့ရပါတယ်။တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် အခုမှ မြင်ဖူးကြားဖူးတာပါ၊မိတ်ဆွေတို့ရော?။ အောင်ပန်းဈေး နေ့တိုင်းမြေကြီးခဲလာရောင်းတဲ့ အဖွားအိုတစ်ဦး ကြောင့် သတိထားမိခဲ့တာပါ။ ဒီမြေခဲတွေက စားလို့ရတဲ့ မြေခဲလေးတွေပါ။ မြေခဲတိုင်းတော့ စားလို့မရပါဘူး ။ဒီဟာကို ပအိုဝ်းလူမျိုးအခေါ်အဝေါ်က *ဟမ်းတော့*လို့ခေါ်ပါတယ်။ မြေကြီးတော့ဟုတ်တယ် … Read more
သွေးတိုးရှိရင် ဒါလေးတွေဆောင်ထားလိုက်ပါ သွေးတိုးရောဂါရှိသူများအတွက် ဆေးနည်း(၁၀)မျိုး ၁။ ရှောက်သီးအခွံပါ ၄ စိတ် စိတ်ပြီး မတ်ခွက်တွင်ထည့် ရေနွေးစိမ်ထားပြီး အအေးခံ၍ တစ်နေကုန်သောက်ပါ။ ၂။ ရှောက်သီးအရည်ညှစ် ၃ ဇွန်း+ပျားရည်စစ်စစ် ၁ဇွန်း ထမင်းစားပြီးသောက်လိုက်ပါ။ ၃။ ရှောက်ရွက်အနု၊ အရင့် တစ်နေ့လျှင် ရ ရွက်မှ ၁၀ ရွက်ခန့် နေ့စဉ်အတို့အမြှုပ် ပြုလုပ်၍စားပါ။ ၄။ ငါးပိရည်၊ ငံပြာရည်၊ ငါးခြောက်စသည်တို့သည် မြန်မာလူမျိုးတို့နှင့် မကင်းနိုင်သော အစာများ ဖြစ်သည်။ ထိုအစာများ စားသည့်နေ့တွင် ဒန့်သလွန်ရွက် ဟင်းချိုကို ကြက်သွန်ဖြူနိုင်နိုင်ဖြင့် ချက်ပြီး တွဲဖက်သောက်ပေးပါ။ ကြက်သွန်ဖြူသည် သွေးတိုးကို ကျစေနိုင်သည်။ (သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ကြက်သွန်ဖြူကို နေ့စဉ်စားသုံးပါက သွေးပေါင်ကိုထိန်းနိုင်သည်) ၅။ ဒန့်သလွန်သီးအရင့်များကို နေဖြင့် … Read more
ငါ့သားမြားအိမျထောငျပွုခဲ့ရငျလေ အမေ ဒါလေးတှတေော့မှာခငျြတယျ သားတို့ရယျတဲ့
ငါ့သားများအိမ်ထောင်ပြုခဲ့ရင်လေ အမေ ဒါလေးတွေတော့မှာချင်တယ် သားတို့ရယ်တဲ့ အမေကိုချစ်တဲ့သားဟာ မယားမချစ်ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါ့သား အမေနဲ့မိသားစုကိုလဲချစ်ပါ မိခင်မျိုးနွယ်ဝင်ဇနီးသည်ကိုလဲချစ်ပါ..အမေ့အတွက်သားကောင်း အစ်မညီမအတွက် မောင်ကောင်း၊ အစ်ကိုကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ ဇနီးသည်ကို မကောင်းဘူး ဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေနဲ့ကွဲ့ မိသားစုကိုချစ်သလို ဇနီးသည်ကိုချစ်ပေးပါ….. မိဘအိမ် မောင်နှမအိမ် ဇနီးသည် မသိဘဲမသွားနဲ့ငါ့သား သူတို့မိသားစုတွေ ငါ့ကွယ်ရာ ငါ့ယောက်ျားကိုဘာသွေးထိုးနေပါလိမ့်လို့ သူ့ဖက်ကအမြင်မျိုးဖြစ်စေတတ်လို့ တတ်နိုင်ရင် ငါ့သားမိသားစုဆီသွားရင် ဇနီးကိုခေါ်သွားကွဲ့ မလိုက်တာတော့သူ့အပိုင်းပေါ့ ခေါ်ပါရဲ့နဲ့မလိုက်ပဲ စကားနာထိုးတာ သွေးထိုးတာလဲလက်မခံနဲ့ငါ့သား မိသားစုနဲ့ဇနီးသည်ကြား သမာသမတ်ကျကျ မျှမျှတတဖြစ်ပါစေ…။ ငါ့လုပ်စာပဲ ငါ့မိဘ မောင်နှမ ပေးတာ မိန်းမပြောစရာမလိုဘူး မထင်နဲ့ငါ့သား အမှားကြီးမှားမယ်… အမေကမွေး အမေပြုစုယုယပေးပေမယ့် အိမ်ထောင်ကျရင်အမေ မပိုင်ဘူး ငါ့သားလေးရဲ့ မိန်းမ မသိအောင်ခိုးပေးခြင်းဟာ အမေ့သိက္ခာထိခိုက်သလို ချွေးမ အနေနဲ့ကြည့်ရင် သူ့မာန ထိခိုက်စေတယ် ငါ့သားလေးရဲ့.. … Read more
လူ့ဘဝအကွှေးကို နှားဘဝနဲ့ လာဆပျရတဲ့ အမြိုးသမီးဖွဈရပျမှနျ
မိုးဦးကျရာသီ၏ တစ်ခုသော နံနက်အစောတွင်ဖြစ်သည်။ မလှလူသည် ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက အုန်းမောင်းခေါက်သံ ကြားသည်နှင့် အိပ်ရာမှ ထခဲ့သည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုသာလှ ယာတောမသွားမီ ထမင်း ထုပ်ပေးရန် မီးဖိုချောင်ဝင်၍ ချက်ပြုတ်နေစဉ် လှလူရေ ဟေ့… လှလူ၊ ခွေးကြည့်ပါဦး။ ခြံတံခါးဆီက ခေါ်သံကြား၍ မလှလူ မီးဖိုချောင်ထဲမှ ထွက်လာခဲ့သည် ။ ဟဲ့… စောစောစီးစီး ဘယ်သူများလဲလို့ အေးဘုံကိုး ။ ဘာအရေးကြီးကိစ္စ ရှိလို့တုန်း။ ဒီမနက် နှမ်းကြဲချင်လို့ နှမ်းနှစ်ပြည်လောက် ချေးပါဦး။ နောင်ခါ နှမ်းပေါ်ရင် ထုံးစံအတိုင်း ပြန်ပေးပါ့မယ် ။ နှစ်စဉ် မျိုးစေ့ ထုတ်ပေးနေကျလည်းဖြစ်ပြီး သီးနှံပေးချိန်တွင် သုံးဆတိုး ပြန်ပေးရာမှာလည်း ကတိတည်သူ ဖြစ်သောကြောင့် မအေးဘုံကို နှမ်းနှစ်ပြည် ချိန်ပေးလိုက်သည် ။ မအေးဘုံသည် … Read more
အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ West Bengal က ရွာတစ်ရွာမှာ ထူးဆန်းစွာ မျက်လုံးတစ်လုံးတည်းသာပါပြီး နှာခေါင်းမရှိတဲ့ နွားငယ်လေးကို မွေးမြူခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပါတဲ့ မျက်လုံးဟာဆိုရင်လည်း ခေါင်းရဲ့မျက်နှာ တည့်တည့်မှာ ရှိနေခဲ့ကာ နှာခေါင်းမပါပါဘူး။ အဲ့ကောင်လေးကို မွေးတဲ့ နွားမကြီးကတော့ လျှာဖြင့်လျက်နေခဲ့ကာ မိခင်စိတ်ဓာတ်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ရွာထဲကလူတစ်ယောက်က ” လည်ပင်ထိတော့ အဆင်ပြေပါတယ်ခေါင်းကျမှာသာ အထူးအဆန်းဖြစ်နေခဲ့တာ ” ဆိုပြီး အံ့ဩစွာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်မိန်းမတစ်ယောက်ကလည်း”ကျွန်မဝမှာ ဒီလိုမျိုး အထူးအဆန်း တိရစ္ဆာန်မွေးတာကို တစ်ခါမှလည်း မကြားဖူးသလို မြင်လည်း မမြင်ခဲ့ဖူးပါဘူး ” ဆိုပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အမည်မဖော်လိုသူ ပိုင်ရှင်ကတော့ ” တခြားအနီးအနားက ရွာကလူတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆိလာပြီး အဲ့နွားလေးက အလုပ်လုပ်နိုင်လားဆိုပြီးလာမေးခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒါဟာ God ရဲ့ထူးခြားတဲ့အရာပါပဲ ပြီးတော့ ဒါဟာ … Read more
ဆရာတျောဘုနျးကွီးအိမျမကျပေးလို့ ဘုရားကြောငျးဆောငျ အောကျတညျ့တညျ့ကမွကွေီးကို တူးကွညျ့လိုကျကွတဲ့အခါ
ဒီ‌မနက်ကျနော်အိပ်ယာနိုးတော့ တစ်ရွာလုံး အုံးအုံးကြွပ်ကြွပ် ဖြစ်နေကြတယ်။ ကျနော့်အိမ်မှာလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲလို့ အိမ်ကလူတွေကို အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ကျနော်မေးလိုက်တော့…. ကိုယ့်အိမ်က ဘုရားကျောင်းဆောင်အောက်တည့်တည့်မှာ မီးသွေး‌တူးနေကြတာတဲ့။ ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့, ရေစိမ်သောက်ဖို့တဲ့။ ဘယ်သူကပြောတာလဲဆိုတော့,ဘယ်ရွာကဆရာတော်ဆိုလား၊ဘုန်းကြီးဆိုလား ညက အိပ်မက်မက်လို့တဲ့။ ကိုယ့်အိမ်က ဘုရားကျောင်းဆောင် အောက်တည့်တည့်က မြေကြီးကိုတူးကြည့်ရင် မီးသွေးခဲလေးတွေ တွေ့လိမ့်မယ်တဲ့၊အဲ့ဒါကို ရေစိမ်သောက်တဲ့ ဗ်ိုင်းရပ်စ်ရောဂါကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မတဲ့။ တစ်ရွာလုံးတူးကြတာ အိမ်တိုင်းလိုလို မီးသွေးခဲလေးတွေရတယ်။အိမ်မှာလည်း ကျနော့်တူလေး အိမ်ခေါင်းရင်းမှာ သွားတူးတာ ပုံထဲကအတိုင်း မီးသွေးခဲလေးတွေရလာတယ်… အဲ့ဒါကို ကျနော့်အမက ရေသန့်ဘူးထဲထည့်ပြီး စိမ်ထားတယ်…။ အိမ်ခေါင်းရင်း ဘုရားကျောင်းဆောင်အောက်က မီးသွေးခဲတွေကို ကြည့်ပြီး လူတိုင်းလိုလို အံ့ဩနေကြတယ်။ ဒီမီးသွေးက ဘာလို့ဒီအောက်မှာရှိနေတာလဲ၊ဘာလဲပေါ့။အထူးအဆန်းဖြစ်နေကြတယ်။ကျနော်ကတော့ ထူးဆန်းတယ်လို့လို့လည်း မခံစားရပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ကျနော်တို့ ကျေးလက်မှာက ထင်းမီးဖို၊မီးသွေးမီးဖိုတွေကို ခုချိန်ထိသုံး‌ကောင်းနေကြတုန်းလေဗျာ။ အိမ်အနောက်ဘက်မီးဖိုချောင်က ထင်းမီးသွေးက တနည်းနည်းနဲ့ … Read more